Alain St.Ange si Seychelles na-agwa AKWAABA African Travel Market na Nigeria
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Alain St.Ange si Seychelles na-agwa AKWAABA African Travel Market na Nigeria
Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Afrika na ndi mmadu enweela mmekorita di iche na otutu oge. Ha chọrọ ibe ha n'ụzọ na-enye ekele mana akabeghị otu esi metụta. Njem nleta nwere ike ịbụ ụzọ doro anya iji wulite mmekọrịta na-adịgide adịgide.
Iji nyere-enye nke a agbam ume, na-ahazi nke AKWAABA Ulo oru njem njem nke Afrika na Naijiria kpebiri imekorita ya na onyinye ndi Afrika n’adabere na US iji hazie ogbako Africa - ogbako nke ndi Afrika nke ndi Africa.
Alain St.Ange, onye isi ndi Seychelles nke bu ndi njem nleta, ndi njem ugbo elu, ndi n'ọdụ ụgbọ mmiri na ndi mmiri, na onye isi ala nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa, kwuru ka ọ na-aga n'elu ikpo okwu na Africa ga-ekpebi iji akụ ya niile na USP ndị bụ isi weghachite Africa. Iji akwa aka site na adreesị ya, St.Ange kwuru site n'obi ya ịrịọ Africa ka ya na Africa rụkọọ ọrụ ka Africa wee sie ike. Alain St.Ange taa bụ onye a na-ahụta dị ka otu n'ime ndị njem kacha mkpa n'ụwa njegharị. Ndị a bụ mkpụrụokwu eji kọwaa ya dịka onye akpọghị ya n’ọgbọ na-abụghị onye ọzọ bụ Ikechi Uko n’onwe ya.
Nzukọ a mere na Septemba 23, 2019 dị ka akụkụ nke 15th AKWAABA African Travel Market na Lagos.
Onye isi oche nke Africa Diaspora Awards, Kitty Pope, kwuru, sị: “Obi dị m ezigbo ụtọ na m so na ọrụ a, na 2019 na-egosi afọ 400 nke ahia ohu ohu Trans-Atlantic. Ihe omume a mechara mee ka Africa dịghachi mma, ọ dịkwa mba ọzọ n'ụzọ ziri ezi site na njem na njem njem.
Maazị Ikechi Uko, onye nhazi AKWAABA African Travel Market, na nzaghachi ya kwuru, sị: “Anyị haziri [African] Award 100 Women Award na 2017, na ụmụ nwanyị nọ n’otu ndị njem nọ na Africa bidoro, na 2018 anyị hazịkwara ndị Africa Aga njem 100 maka ndị na-eme njem nlegharị ma hazie Summit Ndị Ọrụ Ndị Na-ahụ Maka Njem Nleta nke mbụ, na ihe omume a nke Africa Travel 100 ndị mmadụ ụwa ga-emesị kpọkọta ndị isi egwuregwu niile n'Africa na Ọpụpụ. Mmekọrịta a na Kitty Pope na nzukọ ya ga-enye aka mee ka mmekọrịta dị n'etiti oke osimiri. ”
AKWAABA Ahia ahia emeela ka oburu ihe mbu ahia ahia nke Afrika na odida anyanwu Africa ka ndi mmadu bia otutu mba 20. Ngosipụta njem a abụghị naanị ịnya isi ọtụtụ ndị ọbịa kamakwa ọ kachasị mma na nkwalite nke ndị ngosi sitere na ndị isi obodo, ụgbọ elu, ndị ọrụ njem, ndị na-eme njem, na ndị na-eweta ụlọ ọrụ ndị yiri ya na-esonye na ihe omume ahụ.
African Tourism Tourism bụ ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na weebụsaịtị AfricanDiasporaTourism.com nke raara onwe ya nye iji kwalite ọdịbendị ọdịbendị nke ndị agbụrụ Africa bi na African Diaspora iji kwalite njem nleta na saịtị, ihe omume na ihe ndị ọzọ metụtara ihe nketa ọdịbendị ojii na akụkọ ihe mere eme.
African Diaspora Tourism bụ nne na nna ụlọ ọrụ nke ADWT-Awards. Dika ulo oru mmekorita ndi mmadu nke ndi Afrika na-eme njem nleta gosiputara ihe omume di iche iche, ihe ngosi, njem na nzuko ndi ozo banyere ihe nketa omenala. ADWT emewo ihe ngosi okporo ụzọ na nnabata maka Africa na mba ndị bi na ya.